पैसा नै साँघुरो बनाएपछि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउन सकिँदैन । चित्त साँघुरो बनाउँदा सबैलाई खुसी पार्न सकिन्न । त्यसैले म बजेटको आकार २० खर्बसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्दछु ।
‘यो सरकारलाई लोकप्रियता मात्र हेर्न छुट छैन’
वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने लोकप्रिय नारा अघि सारेको नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बाचा गरिसकेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने तयारी छ । तर, बढ्दो चालु खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप …
नेपालमा कायम रहेको भुमीव्यवस्थाले कृषि,उद्योग,जलविद्युत वा ठूला होटलहरु वन्ने सम्भावना कम छ, अव भुमीको वर्गिकरण गरि नयाँ व्यवस्था कायम नगरेसम्म पुरानै योजना र सोचले समृद्ध नेपाल बन्न सम्भव छैन
अर्थ र व्यापारको आठौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
Arthabyapar Pvt. Ltd
महाधिवेशन घोषणाअघि विचारमा विवाद भए एकता प्रक्रिया धरापमा पर्न सक्छ
गुठी विधेयकको कुरा गर्दा, एकाएक सडकदेखि सदनसम्म सरकार डिफेन्सिभ हुनु पुगेको छ । विधेयकहरू ल्याउँदा किन ध्यान दिइएन ? सामान्यतया विधेयकहरूको बढी छलफल मन्त्री, मन्त्रालयहरूले नै गर्छ । मन्त्री काम गर…
ईमेज खवरको हट सिट कार्यक्रममा बजेट लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानि ।
Hot Seat - Interview with Surendra Pandey - 2076 -3- 5
Hot Seat - Interview with Surendra Pandey - 2076 -3-5, For more, visit http://imagekhabar.com Our Facebook Page: https://www.facebook.com/imagekhabar.com...